BISSII WALALOO GARAAGARAA–KAN DUBBIFAMUU QABU-Daboo Al-Kush’ /Dabalaa Jireenyaatin-wALIIF DADDABARSSAATII…Barreessichaaf Yaada kennaa–Teessoonsaa keessaan jira!! – Beekan Guluma Erena
BISSII WALALOO GARAAGARAA–KAN DUBBIFAMUU QABU-Daboo Al-Kush’ /Dabalaa Jireenyaatin-wALIIF DADDABARSSAATII…Barreessichaaf Yaada kennaa–Teessoonsaa keessaan jira!!	Beekan Erena
AFOOLA/OROMO FOLKLORE, Poems July 6, 2016July 6, 2016OROMO
139SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Mee kamtu yaadee
kaa’ee qaba oolmaa
Kamtu ciisee bulaa
Booyyee moo karkarroo
yeeyyi moo jeedala??
Leenca moo dhaddeedha
harqaa moo qeerransa
Weennii moo canoodha
qamalee moo jaldessa?
Goondaa moo goonjiree
focii moo ilbiisa?
Boombii moo daana’oo
soonsa moo girrisa?
Kamtu gaddee dhiisa
dilbii gumbii raamuu
Meeqa maqaa waamna
diina lammi saamuu
Isa nyaatee nyaatee
quufee dhiisee deemu.
Meeqatu halkan lo’a
meeqatu gumbii qota
Meeqatu huree seena
meeqatu qorqee kuta?
Meeqatu jirma xuuxa
meeqatu sanyi buta?
Kana qofaa mitii
Diinni hunda caaluu
inni ilkee cimaa
Nama mataa isati
isas sittan himaa.
Diina tooftaa beeku
Diqdiqa kan tolchu
Kiyyoo kan qindessu
jiraam dachee guutee!
Gomattuu fi xibaartun
Tolchituus ta’e moortuu
Urjiis haa lakkooftuu
badiif taanan diinaa.
Kana qofaas mitii
Hunda yoo lakkofne
isaan sanyiin kuma.
Namas ta’e bineensi
gosti diina taatu
Fedhii mataaf jette
lammiis kan gajaatu
Ilkeen sanyii hurtees
firii kan luqquumtu
gargar hin qoodamtu!!
Innis Laaftoon Qixa!
Amma miti jedhuu
bara durii turee
Waggaa baayyee ta’a
umuriin waan qancaree
dullacha raagee joore
Arra seenaa qofa
guyyaan oolee bulee,..
Bokkuun nama hin miidhu
Seerris daandii hin maquu
safuun faana tolchaa
Mareen murtii muree
haqaan saba bulchaa
Seeraaf safuu eegee
lammii walii galcha.
Amma garuu jedhan,
Safuun saafaa badee
bokkuun nama ilaalaa
Abbaan murtii kanaaf
akka fedhe koraa
Yoo fedhe yaadatee
daba keessaa coraa
Yoo jibbes dhiisee
irra ejjetee taraa
Mataa fi miilla seeraa
isatu irraa qoraa.
Duri,bara gaarii sana
odaan baala baataa
Gaaddisa isaf jedhee
namnis jala lixaa
Amma baala mitii
jirmatu cinaan lataa
Tokko ta’uu balfee
Balloo lama qoodee
Hidda biraa hin baafne
damees tokko baataa
Fireen adda hin taane
soora waliin nyaata
Jirmaf wal jibbuun odaa
bu’aa qabaa laata??
Amma kunoo jedhuu
Warri seenaa baran
Warrii eebba beekan
qaallu fi foollen marti
‘Tokko ta’aa akka odaan’
Gaaddisa ta’uun odaaf
Kana dhabnaan malee
Akkas ittin jedhuu
Rakkoo dhibee odaa
Rooba jabaa dhiisii
bubbeef ni rifataa
Hidda cimeef malee
innuu kutee gataa
Morkii jirmaa gidduun
aduunis qaawwa argata
Odaa mataan laafe
saaqee gubbeen lixaa
Hidda fi jirma gogsee
jiidha keessa xuuxa
Odaan beekaa egaa
arra boolla walif qota
Tokkee baala dhabee
innis laaftoon qixa!!
homaa irra fi jala
Morkiin jirmaa bullaan
hiddas gogsuu malaa
bofa summi hora
Dhaddeen guyyan qottee
booyyeen itti galaa
Odaan guddaan jignaan
summiin sanyi dhora!!
atis ana mitii
akka uumaa kootti.
Anis siin hin ta’uu
atis nan fakkattuu
Baras nuuti lamaa
joortus jaarraa guutuu.
Anoo sin komannee
amala kees baree
Takkaas sin faarsinee
yookan sin abaarree…
Maqaan kees toobbataa
anis hin yaadadhuu
Erga siif hin gallee
anoo maal haagodhuu?
Abbatu of maraan
jecha bofaa mitii
Anis mataa kiyyaa
atis mataa keetii
Tokko hin jedhin lamaan
Cubbuu hin qabuu kun
anuu sittan himaa
Tokko miti nu’oo
lakki duruu lamaa.
Egaa dubbiin baayyateef
harretti hin fe’anii
Abbatuu of maraa
qalbiin koo maraatee
jechas yoo dubbatee
Maal godheen jabaadhaa
ergan abdii kutee??
Abdii maaliif kuttaa
utuu ani siif jiruu
ayyaanni si hinmaaruu
Jedhee natti hasaasaa
Anis jibbee mitii
lunna namaan ta’ee
Waada humnaa olii
waada galeen du’ee….
akka hin jennee
Walii hin gallu
inni ani husee
Ittuu hin toluu
Gorsa hin fedhu
Anaa fi isheen
adda hin baanuu
Qophaa hin beeknu
ANAA FI ANA.
Amma utuu badee
cabbiin kunis baqee
Namniyyuu ni si’aam
Martinuu ni deemaa
Mee abiddas hafuufaa
ho’ee haa boba’uu
Tuullaan cabbiis cophee
baqee nurra haaka’uu
hallayyaatti haa yaa’uu!!
Hurraas itti naqaa
guca isaa qabsiisaa
Cilee gubaa fidaa
laaftoo fi bakkanniisa
Cabbii gubaa baqsaa
ho’aan diigaa jigsaa
Maaliif nu adoocha
qorrii fi dhaamochisaa?!
Dhalachuu hin barbaaduu
miixuu itti hin kaasinaa
Kiiniinii fi qorichaa
limmeelle hin dirinaa
tuffiin hin waaminaa!!
Hayyoo kootti himeera
isheen na hubattii
Dhalachuu diduu koo
isin caalaa beektii
Harmee hin moggasinaa
filannoon kan kootii.
Warra ‪#‎Midwifer‬‬ tif.
MEE KARAM ADEEMTA.
Deemsi kee hin beekamu
Qomoon sin hordofuu
faanni kee mul’atee
Qaxxisaan sin qabuu
namas yoo gaafatee…
Fooliin kees urgaa’ee
funyannis sin suufuu
Ijis du’aa kee argee
ciisees silaa hin rafuu
Lapheen namaa cuftii
waa gaabbee sintufuu…
silaa hin mi’ooftuu
adda sin hin baafatuu
Qoonqoon jiidha fedhee
cophaaf sin hin eeggatu.
Suuta laphee seentee
onnees ni jiraattaa
Fardaa yaadaa kortee
bakka feeten baata.
Egaa maal siin jennu
jirta moo duutettaa?
Firaa moo alagaadhaa
Kaayyoo kee wallalle
mee karam adeemtaa?
Dhoksaa kee nuuf himii
Gartokkee qaama koo
ragaan cuftoo sumaa…
miiraan bira geessaa
Yaadaa kee natti himi
Onnee kee maal fedha
afaanni maal sididaa?
Qooqa kee liqimsee
maa jechi sirkaa badaa??
haada ribuu haqaa
Utuu ragaan jiruu
Maaliif duudaa taata
murtiin maalif maqa??
Furtuun kennaa keetii
Dhaddachaa hin ooliin
Ayyanni kee gaddee
Damma summii makaa
Huccuu qullaa mulquu
kutaa tafatti haftuu…
Hundaaf qalbii dhabee
Du’a durseen du’ee
ofan dachee kaa’ee.
Ka’een seexaa horaa
booreef heexoo dhugee
seenaas yoon gadi diigee?
Anoo sirraan citaa
onnees fedhii lagee.
Atoo abdiis kuttee
anas quba hin qabduu
Onneen si dulloomee
yaaddes mataa hin cabduu..
Maraf horma waamtaa
teessee na komattaa
Qalbiin si gammadee
Jiraatti na dagattee
Seenaa darbe ilaalee
waadaan maaf namiidha?
Atoo anaaf mitii
oduun maal naagodhaa??
waggaa 8 dura,humni addaa tokkoo jaalala yeroo dheeraadhaf nakeessa dhokatee ture dammaksee dandettii koo gaffii jabaa jala galche.Fedhii fi jaalalli Asoosamaa ijollumma ko eegalee nawajjin jiraate diinaa guddaatti geddareme. Sammuun koo bakka lamatti gargar qoodame. Inni tokko, Asoosama akkas jaallattu kana ati barressuu hin dandessuu?? Maaliif barressu hin yaaltu? jedha. Yaadni koo inni biraan Waa’ee maalii barressita? Atoo dandettii akkasii hin qabduu dhiisi! Utuma dandettisaa qabaattesi Asoosamni marti kalaqa barressichati malee dhugaa tokko of kessaa hin qabu, Kanaf waan dhugummaa hin qabne addunyaa ‘minaabaa’ barressestesi dhiistes maal fayyada jedhe nafalma. Hin dogoggorin waan hin argin ykn dhugaa hawasicha keessa hin jirre namni katabe hin jiruuti. Tarii waanti ati arra addunyaa ‘manaabaa’ jettu kun bor addunyaa dhugaa ta’a ykn kaleessa addunya dhugaa turee.. jedhe ittin qaba yaadni koo inni maaliif hin barressitu jedhu. Garuu wal falmiin sammu koo kun guyyaa gara guyyatti jabaataa deeme malee hin dhaabbanne. Egaa turtii keessa anis dhoksee qalama baachuun jalqabe. Barressen ka’a, waanan barresse fuudheen dubbisa, kanan dura barresse cireen deebi’emmo barressa. Takka takkammoo hundumti dhamaate kanaa gaaffi natti ta’een itti dhiisa. Addan kutee dhiisuu garuu hin dandenye. Ayyanichi wareega koo nanjedha halkani fi guyyaa natti deddebi’ee. Anis waadaa nyaachurra waanan qabu aarsaa gochuun filadhe.Yoo haarsaa koo tuffate innumti ayyanasaa naf haa dabaluu ani garuu kanan qaburraa hin hambifadhu jedheen murteffadhe. Arra kunoo hawwiin koo galma geesseetti ani boqodheera kanan qabu mara funaanee abba wareegaf qophessera. Egaa yaa abbaa wareegaa; “yoo qalbiin kee gammaduu dadhabe nan abaarin ayyana kee naf baayyisi malee” !!
Yaa hiriyoota koo walaloon gadii kun yaadanno kitaabattidhaa yaadatti naf qabadhaa yeroo dhihootti isin biraan ga’aa.
Waaqni Oromoo nu haa gargaru!!
ANAF SIIDAA TA’I !!
arris eessa ba’aa?
Hundeen seenaa kunoo
guyyaa darbee ka’aa
Siidaa haaloo mitii
Boriif dhaamsa qabaa
kuukkii guddaan isaa
Siidaan hundee dhabee
jigee seenaa cabsaa.
Anis boriif jedhee
yaadeen siidaa dhaabuu
Meelaa waadaa keetii
eelaan laphee qabuu
Siifaan siidaa dhaabee
siidaan onnee hincabuu!!
Egaa abbaa seenaa
siidaan sif dhaabbatee
Waadaan sirka cabee
fidii jala ka’ii
Egeereen si egdii
fiigii biraan ba’ii
Saba koof kudhaama
anaaf siidaa ta’ii !!
ATI OFII MAALUMA??
Qooqni kee muuziqaa
jechi kee kiilolee
Yaadni kee urjiidhaa
ifa daandiif tolee
Homtuu sin madaaluu
Faayaa jiruu uumaa
abjuun siin qajeele.
Miira ko si’eessuu
uumamni kee marti
Gurri koo si eegaa
funyaan ko sisuuftii
Lapheen koo hasaastee
fedha kee faarsitii
Ribuun siin dhifamaa
dhiigni siin dhiibamtii
Ati garuu maalumaa
dubbiin dhoksaa keetii?
Daandii situ tolchaa
xurree faana namaa
Sodaan abdii hin kuttuu
egereen sitti argamaa
Naasuun sin rifaasisuu
abjuun siin hiikamaa
Nadhiin sirra roobaa
cophni keeyyu dammaa
Lubbuus situ sooraa
maddi annisaa sumaa !
Gaddi sibira hin jiruu
Burqaa kee cuqqalee
nadhii kee hin ballessuu
hidhee sin teessisuu
Atoo maqaa dhabdee
maal jechuun si ibsuu?
Kenna waaqa guddaa
Burqaan hin borofnee
kuullen afaan dammaa
Wiirtuun lafee dhugaa
Jaalalli kee namo’ee
lapheen koo raafamaa
Moggasi kee eenyuu
maal jedhen siwaamaa??
Maqaa keen wallalee
ati ofii maalumaa?
Arra akkasin ta’e
Akka durii se’ee
Sireettin ol ba’e
Dhaqeen rafuf ka’e
Didee dawoo lixe
Daandi narka gate
Harka ko naxaxe.
Dhiiseen lafa kaa’e
Doofaa naman ta’e
Fuulaan of haxaa’e
Gadi ciiseen macha’e
Rafuu dhiiseen ka’e
Hirribni koo hingu’e
Anis dhiiseen bu’e.
Oolmaa koottan deebi’e
Of duuban qaari’e
Barbaacha keen ka’e
Haasaa keen gaadi’e
Isan sirra dhaga’e
Dhoksaa keen hari’e
Isa suusii naaf ta’e.
Sammuu koo dhaabbate
Jecha kee yaadate
Isa garaa nanyaate
Isa qalbii ko hate
Jecha narka fixe
Kan sirra nakute.
Waraaqaa koon kute
Qalaman koon bute
Jechan irra guutee
Isati anan jette
waan afaani sibaate
Onnee koo rukute
Keessa koo boqote
Immimman narra kute
Harri akkanan dhiite
Boris yoo bariite
Lubbun du’a turte
Jiruun itti fufte
Jecha keef gaabbite
Ati yaa Ori’oon
urjii bifa waaqaa
Sadii taatee baata
maaltu sirra maqaa?
Simboon suuraa kee
qopha nama haqaaqaa.
Yaadaa nama buttaa
qalbii namas hattaa
Ol fagaattee teessee
jiruu ko dawwattaa
Yaadaa keen miidhame
anan maal gootaa??
Argaa kee hin quufuu
halkan mara dhufuu
Yaadaa keen oolera
situ taa’ee ifaa
Namnu dhoksaa baree
Dukkana hin sodatuu
si arguuf guggufaa.
mootii urjii qariii
Anoo sin miidhamee
falli jirtii tarii?
Utuun siin si eeguu
lafti geessi barii
Ati waaqa sanaa
Situ waaqa kiyyaa
Yaa shibbirroo barii
Akkam hin argituu?
Fala maaliin qabaa
Dhibee koo itti himii
Kan ati naf jettuu…
“Jalalli tee jabduu
Waan hedduu nagootee
Calliste yaadni tee
Jiru kiyya kana
Utuu naf argitee!
Jedhii gurra buusii
Dhaamsa koo naf geessii
Hangasu sin eega
Deebiishe naf ibsii.
Abdiin koo dur du’ee
Hamilee naf tumsi
Hundumaa mee dursii !!
Ta’u hin ooluum
kun hin jiruu
Garaa hin muruu
gaabbii hin guuru
Ba’aa hin guuruu
Eelee hin jiru!
Da’oo hin bulu!!!!!
Akkam jedhee ibsu
Maal jedhee leellisu?
Waa’ee mucaa Mattuu
Oromoon maal jettuu
Kuullee laphee hattuu
Adunyaan haa bartuu!
Faaruushe natti himaa
Faayyoo afaan dammaa
Dubbii qalloo Jimmaa
Ishee Gibee gamaa
Yaa mucayyo Baalee
Mana keen wallalee
Kan kees natti caalee
Naf jiraadhu ammallee!
Jirtuu warra harargee
Faayaan afran qalloo
Qalbii maaliin qabaa
Argee durba walloo.
Atoo saalfii hin beektuu
Qalloo Dirree jirtuu
Fala naan argituu
Kan hustee namiitu??
Isinoo maal jettuu
Ishee Shawaa jirtuu
Kaarruu mucaa Baatuu
Lapheen maal haa taatu
Anoo waamee hin fixuu
Diimtuu Amboo yaatu
Aadaa sanaf duutii
Isheen kan Booranaa
Akkam jedheen ibsa
Rakkoo guddaan kanaa
Qamni qofaan honaa
Jecha naf barbaadaa
sammuu koo naf banaa
Yaadni koo badeera
Baree kan Booraana!!
Atoo mucaa Arsii
Maalif na ilaaltaa?
Yaada kee naf ibsii
Laphee ko deebisii
Qooqa keen nagorsii
Kan Gujii mee dursii!!
Dagachuu hin danda’uu
Ishee Gimbii jirtuu
Ofibira ishee dhabnan
laftis silaa hin iftuu
Maal jedhee itti himu
Boontuu lammif duutuu
Situ hunda caalaa
Durbis sin dursituu
Afaan kee jallattaa
Jecha nan ergituu?
maalif nan gorsituu??
Utuu aduun saaqee
Ribuun nu dammaqee..
Martuu fala argataa
Dhalootni ni socho’a
Namnuu ni jabaata!
Mee abiddattis hafuufaa
Cabbiin nu hubeeraa
Cabbiin haa cala’uu!!
Afaan koo qabeera
Dubbii koo fixeera
Naaf baraa yaa firaa.
Maqaa koo hin dhahinaa
Karaa koo hin ba’inaa
Callisuu naf wayyaa
Kan duraa nagayaa.
Isaas ni shakkituu?
Dubbadhus nan jettuu?
Xis xinbis hin jedhu
Homalle hin dubadhu
Dubadhes hamaa hin ba’u
Dubbiin koo silaa hin ta’u!!
Afaan hin qabatiin dhugaa kee dubbadhuu
Ilmaa kee xiqqichaaf ergaa kee dhaammadhu
Dhugaan kee hin badduu abdiidhan naaf kaadhu.
Yaa dirree calanqoo yaa ishee dhiigaa dhugdee
Gootaa meeqa nyaattee awwalchallee kan dhabde
Callistee hafuufii garaa koo nagubdee??
Afaan kee saaqqadhuu gootaa maqaa dha’ii
Gumaa kee deebisuuf murtiidhaan qabsayii
Yuuyyeef gurra hin kenniin akka abbaa keeti ta’ii
Aduyii balleessii biyyaa keerrattis mo’i
Gadaa baddee deebiisii garaa koo naciibsi
Jaalaalan beekamtaa hollaa koo nafgorsi!!
Abban murtii silaa labsii baataa
Abukaattos yoo ta’e cinasaa dhaabbata
Jallina murteessuf dhaddachatti kaataa
Ajjeesee ballessuf murtiitti ariifataa
Dhugaa dugda kutee sobaaf fedhii guuta.
Eega kana ta’ee beenyaan haqaaf falmuu
Midhaama baataani ittiyyu reebamuu
Jaalalaa dhoksanii furmaati hin argamu!
Jallina abba ormaan lubbun ko maaf gubataa
Dhugaa ajjesisees qalbiin maaf jiraataa
Isaaf jechaan du’a seenaan na yaadataa.
Du’i naf hin oolle dhugarra nan maqsuu
Sodaa abba keetii jaalala kee hin dhoksuu
Dhugaa baadheen du’a labsiin kee nan dagsuu
Du’een obbafadha qalbiin si haa ciisuu!!
Dhoksaa keetu baayyatee miixuu guddifteetta
Carraa biraa hin qabduu ji’a kee fixxetta
Situ hin barreef malee silaa gadamessatti hafta.
Bo’aa nusimachuuf maaliif ariifatta?
Dugda addaa hin qabdu dugda dhiiraa baattaa
Amma egaa qopha’i dhalachuu filtettaa
Ililillee sodaattee atiyyu cal jettaa.
Gaaffiin akka jiru ija keen agartaa
Asi buutee achi buutee sodaan guraaramta
Handhuuraa kee hidhamtee erbeen ni xaxamtaa
Beelaa argitee hin beekne jalqabaaf wal barta
Harma hodhuu akka qabdu gaafas murteffatta
Ijaartee deebitee jigaasatti agartaa
Addunya bal’oorratti namumma shaakalta.
Fala kee yoo dhabdu atis ji’a taata
Biiftuun hagugamtee dukkanaaf fuula iftaa
Gar-tokkee kee dhokfatta gaafas na fakkatta!!
Fuldura koo ifa jira
Mee naf obsa egaa firaa.
Dukkanni harra nan naasisu
Gorsi jaamaa nan doorsisu
Deemsa korra nan deebisu.
Ani argeera burqaa ifaa
Biliqqeen kakuu natti ifeera
Dukkanan duuba ifa jira!!
Darbeen deema fulduratti
Hanga abjuun koo dhugoomutti.
Iji jaamtes ni banamti
Gufuun dandirraa ni buqqati
Rakkon jaamaa hiika argatti
Gantuun hiriyaa ni qaanofti
Lafeen cabdee gad harcati
Qaanii uffattee yommus rafti.
Lammin jaamtes nayaadatti
Biyyi lafas yoos nabarti
Galmee seenarra kun ni turti!!!
Callise hin callistu
Qophaa koos nan dhiistu
Afaan kee hin banamu
Jechi kee hin dhaga’amu.
Ayyanni kee nawaama
Ergaas natti dhaama
Nagaa koo nasaama.
Dhibee kee dubbatta
Rakkoo kees natti himta
Qooqa kee bareera qalbiin narifata
Garaatu naciisa keessi koo nagaa argata
Feetemmo nadhiistee badda
Achi buutee kee dhabeen ofii taa’ee gadda.
Anis akka keen duuda.
Urjiinis nan hooda
Jechis narka dhuma.
Ofii ati fira hin qabduu
Dureessa hin barbaadduu
Bakka nyaattee dhugdu?
Dinqa honaa kana qooda dhuftee ciiftu
Irribaas nakastee kan garaa nagubdu?
Egaa maal sif godhu rakkoo kee natti himi
Afaan keen haa ta’u yooka mallattoni!!
Hec..! tuffi..! innimoo?
Haftuu fuudheem! dubartii dullattii
Namaa maalii seetee qamalee fakkatti
Waaroon irra hin bu’u bifa gurrachofti…
Isin ta’a wal-gaafadha
Feetan itti kolfaa
Ilkan itti baasa
Tuffi fi oduun keessaan maal bu’a buusa?
Takka shirir hin jedhu inni abba warrati
Maatii bulchuf dhama’a silaa seerasati
Kabaja guddaas qaba ollaasa biratti
Hamataan bu’aa hin buusu isadha abban murtii
Nagaadha fi jaalalli kaayyosa durati.
Dhugaan kana hin turre
Ollaan sana hin barre
Biiftuun gadi lixxee halkan mara dhufu
Manatti gallaan shakkin bira hin hafu
Qorannaa jalqaba dadhabaan hin rafu
Niitiisa fi daa’ima walitti qabata
Gabaasa caqasa gaaffiin mataa xaxa
Daa’ima huqqattuu kan beelli ajjesee
Fooni irra fixee lafee bakke baase
Sodaan jiitanessee dullan lafee cabse
Ija keessa ilalti ifannan kinesse.
Haati manaa hin dubbattu haftumma rifatti
Haftuu jedhamurra cunqursaa filatti.
Kunoo akka kanaa dhoksaan manasatii
Kan ollan hin beekne iddoo jaarsummati.
Kana dhokfattee raftii dhalotattin cufti!!!
Akkam jirta fayyaa keetii?
Bilbila koo maa hin deebisne maal taateti?
Lakki aboo ati fayyaa mitii?
Yoom bilbiltee nadhabdeeti?
Bareeddu ko sagaleen kee sirri miti
Natti hin tolle ergaa silaa dubbiseti.
Ok! hmm…dhiis innoo ofumati.
Ani hin cufne rakkoon kun kan teeleti
Yaalaan turem bilbila kee anuu sila
Quba qabdaa nannoo sana rakkoon jiraa?
Rakkoo maali bareddu ko?
Kan bilbilaa… jechuun ko..
Jettee sobda nasossobdaa
Naf hin barre dhugaa qabda!!
Ani kan nadhibu bilbilli kee
Nuffee hin beeku kijaba kee
Ofii sanyiin isaa biyya kami
Nokia sumsung moo smadl?
Atis beekta ani sin dhoksu
Si qofaa dha kan naf obsu
Kanaf naman sin qixxessu
Sobee ta’es ani sinfaarsu
Argadhef miti kan sidursu
Maalif abjuun kan najoorsu?
Egaa tokkitti ko nan miidhin
Dhugaa taanan nan dhoksin
Dharan garaa nanraasin.
Asi ilaalee achis ilaalee
Gaariin dhabe mudaa malee
Tokko hin jiru hundu hin tolle
Nan callise hojii uumaa gidduu hin gallee.
Inni qabus galata kee hin jenne
Haarsaa godhee garaa sin ciibsine
Fedhii keetif hin dhimmine
Harka deegatti hin hiixanne
Darbee kaata fulduratti
Itti ida’uuf qabeenyatti.
Deegaan taa’ee harka ilaalu
Nyaatee buluuf bo’aa oolu
Waadaa Rabbiif tokko hin tolu
Dhabee malee as kan oolu
Utuu argatee kansaa hin caaluu?
Jechuuf ka’een itti dhiise
Gola sammuttin ol deebise
Qalbii dhufe na ittise.
Innis nama adda hin ta’u
Utuu argates isa hin ga’u
Tuulee ka’uuf kan dhama’u
Dubbiin hamaa gaarii hin ta’u.
Maalif laata wal-calmani
Kun argatee sun dhabuuni
Dhoksaan Rabbii guddaan kuni???
Obsi koo dhumeera
Namas hin komadhu
Gadheetti hin himadhu
Ofiko hin baqadhu
Gaabbee quba hin nyaadhu.
Garaan koo bal’aadha
Dhoksaan koo guddaadha
Bor nan sodaachisu
Gad-baasee hin odeessu
Horma hin dhageessisu
Diina koo garaa hin cibsu.
Qophaa koon jiraadha
Yaada keessumatu Of duuba na-buuse
Yaadanno jalalaa fuudhee
Jalaala ho’a sana isa ofii miliqe asitti nadhiisee.
Isa ofii cabba’ee
Birrin qalbii cabsee!!
Yaada na jitesse
Mana kan nabase
Dandiitti kanarra isa qabee natirse.
Gaaddisa hin barbanne
Beellama hin qabanne
Jaalala hin dheebonne
Itti hin karoorfanne….
Kan ishees adda hin turre
Ergitee nan waamne
Anis itti hin dhaamne
Yokan hin dhukkubne.
Fagootti si argee
Lafatu natti siqe!
Daandittin qallo dha
Dubbittin balloo dha
Guyyattin farro dha….
Wal-bira hin dabarre
Namas hin qaanofne
Harra garuu xurree miti muknis cinashee hin jiruu
Akka guyyaa sanaa gaaddisaf kan tolu.
Daandittin bal’attee karaa guddaa taate
Nan garuu namite!!!
Hiddi foon hin ta’u dhiiguun isaa dirqamaa
Xannachi hidda miti isaan walii lamaa
Hidda malee xannachi hin dhiiguun kanaaf mammakama!
Kana wallalteeree beekaan
Inni katabee tuulee seenaalee duranii
Dubbii hundee hin qabne barreessee maxxansee
Dhugaa fakkeessuuf amantiin mi’essee
Wallalaa homaa hin beekne daranuu kan jaamse!!
Ateetee fi Hirreecha
Qaalluu fi Guddifachaa
Aadaa mudaa hin qabne
Tokko maqaa hin dhofne
Isaan hin katabne
Galmeen hin qabanne
Dhalootni hin baranne
Seenaan hin dhagenye
Borif ol hin keenye….
Aadaasa fi duudhasaa
Bu’aa sirna Gadaa
Inni akkamiin badaa?
Mee eenyu jettu
Callisee kan dhiisuu
Boraanaa moo Arsii Baalee
Wallagga moo Salaalee?
Gujii moo Iluu Abba bori
Wallo Kamisee ykn Harar?
Karrayyuu moo Matakkal
Yokan Jimmaa abba Jifar?
Mallatton isaa Gadaa dha
Caayyaa isaa Odaa dha
Hin dagatinaa malee
Guddifachaan kansaa dha!!!!!
Kobbee lafa hin keenye harkatti baadheera
Waraqaas hin dhabne najala guuteera
Rakkoo jechaa hin qabu Afaan Oromorraa
Qalbiin gab nan jenne barreessuu hawweera
Gurrikos fayyaadha gowwomsaa jibbeera
Harki nan naafannee qubni koo fayyaa dha
Ifni koo hin dhaamne taajjabbin guutuudha
Onneen nan dhaamonnee jaalalan ho’eera
Waadaan nan gowwumsu namarras hin eeguu ittin miidhameera
Kaleessis nagatti boris dhimmasati sossobbaa nuffeera
Egaa maal naf maltuu furmaati koo maali boqonnaa dhabeeraa??
Rakkoo daawwaa dhabe dhukkuba barreessan qabamee ciisera!!
Anis daabee atis qarree
Kan hin beekne waan tokkollee
Waaqni guddaan gadi nulaalee
Laphee keenyatti daandii bane.
Onneen keenya jaalalan yoo
Akkas jechaa hin turree?
wal hammannee gangalanne…..
Obsa hin qabu ati dhibnaan
Hin boqodhum waan fedheen
Nagaa hin qabu koo qalbiin
Hin jiraadhus sidhabnaan…..
Safuu!… safuu!..safuu namaa
kan nadhibu dubbiin uumaa
Wal hin beekneen lubbuun lama
Hawwii qabuuf quqquqamaa
Waadaa hin eegne maaliif sobee
Namni maaliif yaada tuulee yaada
Qaawwaa jirtuttis jirma buusa
Harra hanqisee bor of quubsa
Akka hawwiisaf tokko hin hafne
Nyaatee dhuga uffachuufis hin
Harris darbee akka amalasaa
Boris dhufee harra ta’e ganamasaa
Sanyiin namaa isa hin seenee
yommuu arguu harka duwwaa
Egaa hir’uun harraa erga hin
guunnee bor keessattii
Qaawwaa duuchuuf jirma guuruun
sun kan maaliti?
Taa’ee yaadetan fedhii namaa
Raaji…jedheen dhiise martuu harra fi bor
gidduu yaadaan guraarama.
Dhugaan garuu kana hin turre
Hawwii: Egaa kunoo asi geessetta
Waadaa tokkos naf galteetta
Murtii keetu rakkoo ko tasgabeessa.
Sammuu: Mee ammaf dhiisi gaaffii kanaa
Ani harra ofiiyyuu bututeera
Gaabbiin murtii darbees naguteeraa
Kanaaf ciisuu barbaadeera…
Jedhee dubbii cufuu yaadee
Maal godhare fallo hinjiruu dhugaa didee.
Hawwii fi Onneen wal dhabnaan
Silas eessaa dhufaa boqonnan?
Jedhee furuu yaadee jaarsumman
Itti fufe waadaa onnee yaadachuuni.
Akkam oolte yaa onnee koo
Mee sigaafadhu ani waan tokko
Dagateettaa kan gaf tokkoo??
Maal keesseetta kan boriif?
Daawwaa qabdaa misirroof?
‘Isa mirgaan si dha’eef bitaa kees geddariif…
Hin sodaadhu wanti marti gaarummaafi’?
Mammaaksa kee akkasumanii…
Isaa amantee teesse gowwummani?
Egaa mee dubbadhu jaarsoliif.
Jedhee itti iyyee sammuuni
Gaaffii fi fedhii Hawwii hordofuuni.
Silaa dhugaaf miti hawwii fooniin sardamuuni.
Onnee: Onneen maaliif callisa kan jetanii
Afaan kiyyas kan beektanii
Mee maaliif nan dhiiftani?
Egaa akkas taanan kun carraadha
Callisuun koos naf deebidha!!
Naf dirmadhaa qofaan iyyaa??
Odaa fi Qilxuun tokkoo biyyaa?
Qilxuu beektuu amalasaa
Bonni gubnaan baala arcaasa
Inni arganan maal abbasaa
Eeguuf jedhee jiidha arfaasaa.
Kun qaani mitiiree odaa ko biratti? Egaa Qilxu fi Odaan maaliin walfakkatti?
Inni Qilxuu seetee Odaa murtuu
Sin eebbisa eebba fudhu
Ilma jedhii yuuyyee godhuu
Sanyii diinaa guddifadhuu
Ilmoo bofaa boraafadhu
Bariin kayii reeffa baadhu
Ergaa waaqaa hirranfadhu
Utuu hin du’in du’ii dhagaa baadhu.
Qaanii tayii sanyii kolfaa
Guurii nyaadhuu haftee hoffaa
Silas seexaa hin qabdu atoo boffaa!!!
Inni durii amalli kee
Kanan hawwe guyyaan argee
Suuta jettee kan dubbattuu
Kaayyoo keetiif hin boqottuu
Oduu dharas tasa hin beektu……..
Eessa jira meerre amma inni?
Gola seenaa ol-ka’eeni
Lammitti himuuf barbaadeni
Shakkii guddaan naqabeeni.
Moo…..kan kee hin turree ergisanii?
Atis beekta sin jaalladha
Kan biraa hin beeku sin abdadha
Mee maal jedheen laphee kootiif deebi laadha?
Egaa dhiiroo biyyi lafaa
Dhugaa hin beekuuf nalafafa
Ana qalbiin nadhama’e
Amma utuun mootii ta’ee
Gurras qabaa sidhaga’uuf
Ijas qaba si ilaaluf
Anoo hin jiruu mootis ta’e
Yoo waan martii naf qixa’ee
Nan dubbadham ani isa harra
Boollan buusaa ba’a narraa
utuun beekuun talbaaja’a
Dhugaa dhokseen burjaja’a.
Alaalarra teenyee, gaafa holloo
Akka jettu taanaan, na jaallatta
Jaalallis gochama, jechaan hin
Egaan akkam godhee, ka jettu
Hirribaan adoodee, baran lafee gate
Cinaacha koo bitaa, keessaa kan
Tarii sidha taanaan, isheen naaf
Mee ka’eetan, akkas godha:
Ragaaf dhaabeen, Waaqa guddaa
Gaaffii torba, si gaafa dha.
Silaa… waa amalli, dhala namaa
Arrabatu lamaa… bulees
Bultoo ijaarrannee, gaafa mana
Daa’imas godhannee, achiis
Akkuma kee har’aa, jaalala
Moo… Cinaachaa na baatee, qoree
Dirqama bishaaniifi, midhaanii nat
Amma utuu wal argeen, fageenyaan
Anis gala turee, ganna sagal taa’ee…
Waadaa seente eegdee, dhufa koo
Sodaa Waaqaaf bultee, ejjarraa
Moo… Miira kee dheebote, dheebuu
Qaama kee dhuunfaa koo, alalee
Balaa tasaa ta’ee, dhageettiin na
Yoo gurri koo lachuu, dhaga’uu na
Akkuma kee durii, ana faana taataa?
An siinan dhaga’aa, ati anaan
Moo… Jechoota jaalalaa, jibbaan
Hin dhaga’u jettee, waan feete
kanan qabu marti, tasa narkaa
Amma utuun hiyyomee, daandiirratti
Atis ana waliin, waanin ta’u taataa?
Moo… Na beekuu na gantee, argaa
Heeruma lammataaf, warratti
Qaroon yoo na jaamee,
Ifni koo yoo dhaame
Ija koo naaf taataa?
Baastee na galchitaa?
An siif jira jettaa?
Abdii natti hortaa?
Moo… Dukkanaaf na laattee, ifa
Tirsitee geessitee, allayyaa na
Golfaan gogsee qabee, oroomaa na
Dhukkubni daddarbaan, jiitessee na
Achittis madaa’ee, amma utuun
Jiraatti samoomee, ciisatti alba’ee…
Cinuma koo turtee, na
Fooliinsaa si hin jeedhuu, qaama
Moo atis… Akka warra kaanii, naaf
Baqa qaba golfaaf, na dhiistee
Hollaa daboo waamtee, jiraat na
Egaan mee yaa giifti, haadha ilmaan
Gaaffiin koo xumuraa, maddi sodaa
Waraqaan waamichaa, si dura na
Amma utuu si dursee, natu du’a
Biliseefi Abdataa, Lalistuufi jiraataa
Ilmaan waliin horre, akkam goota
Akkuma kee durii, barumsaaf ergitaa
Moo… Akaa’ii baachiftee, ganda
Daa’ima keef jettee, waa hunda
Moo… Harka abbaa buddeenaat,
ilmaan koo eelchita.
Dalagaan eegale, isaantu itti fufaa
Moo… Du’a kootiin du’ee, ana waliin
Seenaafi aadaasaanii, qo’ataa
Isaan taasistaaree, sabboonaafi
Faayidaa dhuunfaarra, kan sabaa
Doorsisa hin seessanii, hidhaan
abdii hin kutuu?
Du’illee yoo dhufe, lubbuun hin
Moo… Namoomaa ba’anii,
Goobanaa ta’anii, saba gurguratu
Teessoo Barrssichaaf As Kana Tuqaa About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	BEEKAN GULUMMAA IRRANAAFI CALANQOO SHOW’ Haala Yeroo tokko tokkorratti, Caamsaa, 2017 - May 24, 2017	HIDHII XUUXUUN FURMAATA HINTAATU: Baarentuu Gadaatiin: Halagaa Humnaan Nama cabse, sossobbaan Hinmo’atani!, Caamsaa, 2017 - May 22, 2017	ODUU GADDAA: OBBO BIRHAANUU BULTOO; SODDAA GOOTICHA OROMOO OBBO BAAROO TUMSAA, OBBOLEESSA GOOTICHA OROMOO JENERAL DAMISEE BULTOO BOQOTEERA! Sirni Awwaalchaa Biyya Dhalootasaa Oromiyaatti ta’a! - May 18, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa139SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DUGDA DHIIRAA- Asoosammoota gaggabaaboo akka ajaa’ibaa-Daboo Al-Kush’ /Dabalaa Jireenyaatin – Dubbisaa, daddabarsaa, yaada kennaa…!!!
“BORU IIDA!” – ASOOSAMA GABAABAA (Seenaa ijoollummaa irratti kan hundaa’e) Barreessaa: Saphaloo Kadiir | Abdulbasit →